Cameron.....: Mr. Sunshine…..
မိုးရာသီပေမယ့် ဒီနေ့ မိုးမရွာဘဲ နေပြင်းတယ်......🌻
ကိုယ့်ရဲ့ Mr. Sunshine လေးနဲ့ ဆုံဖြစ်တယ်....။ တွေ့ဖို့မရှိဘဲ အကြောင်းအရာက သူ့အလိုလိုဖန်တီးလာတယ်...။ ခုတလော စိတ်ထဲ တစ်ခုခုတောင်းတမိရင် ဆန္ဒတွေကို 😇 တွေက ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တယ်...။ Mr.S ကိုအိပ်မက်မက်သေးတယ် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကပဲ...။ ဟုတ်တယ် အိပ်မက်ကနိုးလာတော့ "နေကောင်းလားလို့" သူ့ကိုမက်ဆေ့ပို့ထားခဲ့တယ်..အဲဒီကနေ အမှတ်မထင် ဆုံဖို့အကြောင်း ဖြစ်လာခဲ့တယ်....။
မိုးမရွာပေမယ့် မမြင်နိုင်တဲ့ လျှပ်စီးမျှင်တွေက သူ့မျက်လုံးကနေ ကိုယ်မျက်လုံးဆီကို တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ ကူးလူးနေကြတယ်....။ အေးမြတဲ့ မိုးဖွဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ အပြုံးတွေကလည်း ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံနိုင်ခွင့် စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုအတွက် သင်္ကေတတစ်ခုလိုပါပဲ....။ ဘယ်သူမှမသိလိုက် သတိမထားလိုက်မိတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တစ်ခု ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ စက္ကန့်ပိုင်း မိနစ်ပိုင်းလေး ပေါက်ဖွားသွားခဲ့တယ်....။
ကိုယ်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တချို့ကို သူရိပ်မိသွားလို့လား....."နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တွေ့ကြတာပေါ့"လို့ နှုတ်ဆက်ခါနီး သူပြောသွားတယ်...။
ညနေအိမ်ပြန်ရောက်တော့ Mr. Sunshine ☀️ နဲ့ သူမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ် ....။
ကျေးဇူးပါ ကလေးရေ .... ကိုယ်တို့ပြန်ဆုံဦးမယ်နော်......☺️
အခုကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မသိပ်သဘောကျတဲ့ မင်းသား
လီဗြောင်ဟွန်းပါတဲ့ Mr. Sunshine Ost
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကတည်းက Netflix မှာပြပြီးသားဆိုတော့ တော်တော်များများကြည့်ဖူးကြပြီးပြီထင်ပါတယ်...။ ကျွန်မက ခုမှ Telegram မှာ မြန်မာစာတန်းထိုးကြည့်နေတာ အပိုင်း ၂၄ ပိုင်းမှာ ခု အပိုင်း ၁၃ ရောက်ပြီ...။ စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကာလ အမေရိကန် တရုတ် ဂျပန် ရှရှားတွေနဲ့ တော်လှန်ရ မဟာမိတ်ဖွဲ့ရ အဲခေတ်က ကျွန်တွေရဲ့ဘဝ အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှု စတာကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လေး....။ အသက် ၅၁နှစ် မင်းသားလီဗြောင်ဟွန်းရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ သူ့အပြုံးတွေက ကြွေချင်စရာ....။ မင်းသမီးလေးက ချောချောလေး အပြင်မှာ သူနဲ့ အသက်ထက်ဝက်လောက်ကွာမယ်... မင်းသမီး Kim Tae ri ကလည်း ပြုံးလိုက်ရင်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ...။ အမျိုးအစားက Historical Drama Romance.
A Korean boy fromapoor family who ends up in the United States after the 1871 Shinmiyangyo incident returns to his homeland duringahistorical turning point. Now an officer with the American military, Eugene falls in love with Ae-sin, an aristocrat's daughter, and discoversadark scheme to colonize the country from which he once fled. Ae-sin tries to figure out if Eugene isafriend as they wonders what the English word "love" means.
Budget: ₩40 billion
Original languages: Korean, Japanese, English
Composer: Nam Hye-seung
Original release: July7–; September 30, 2018
Posted by Cameron at 14:10
Common Sense …..